Maalin dhan - maalin kasta - dadwaynuhu waxay iisoo diraan, fariin ii soo diraan, i soo booqdaan, i soo booqdaan, i soo wacdaan oo si deg deg ah iigu soo dir su'aalo la xiriira domains, awoodaha, CSS, tartanka, istaraatiijiyadaha ereyada muhiimka ah, arrimaha macmiilka, meelaynta iibka, istaraatiijiyadaha suuq geynta, hubinta, baraha bulshada, iwm. Waxaa laygu martiqaadaa inaan hadlo, wax qoro, caawiyo, la kulmo… adigu magacow. Maalmahaygu waa mashquul yihiin oo si aan caadi ahayn u dhammaystirayaan. Anigu ma ihi qof caqli badan laakiin waxaan leeyahay khibrad badan oo dadku way gartaan. Waxaan kaloo jeclahay caawinta.
Caqabada ayaa ah sida loo adeegsado qiimaha mid kasta oo ka mid ah arrimahaas yar yar iyo fursadaha. Aragtideyda ayaa ah in ay la mid tahay sidii waagii hore oo saliida ay saliidaha ku sii hayn laheyd taayirada tareenka si ay dhaqso iyo fudeyd ugu socoto wadada. Qaado saliida saliidda leh tareenka ayaa istaaga. Saliida waxay ogtahay meesha, goorma, sababta iyo intee. Waxaan dareemayaa sida saliidda saliidda - laakiin marka loo eego miisaanka ballaadhan. Su'aalaha la i weydiiyay waxay u baahan yihiin khibrad iyo khibrad aan soo dhisay 2-dii sano ee la soo dhaafay.
Way adagtahay in la qiimeeyo ama la xasuusto saliida marka aad leedahay tareen ka soo roganaya dhabbaha, in kastoo. Tareenka, dhuxusha, kirishbooyada, jidadka tareenka 'dhammaantood waa kharashyo' waaweyn 'iyo xalal' weyn 'oo si sax ah loo qiyaasi karo. Inaad saliideysato maaha wax fudud. Waan ogahay tareenku inuu si xawli ah usocdayo sidii aan ahaan lahaa hadaanan saliideynin wadada - laakiin run ahaantii ma jirto hab hubaal ah oo lagu cabiro saameynta miisaanka noocan ah
Ma lihid saliid? Waad ka iibsan kartaa kheyraadkaas meelo kale ama adiga laftaada ayaa baaritaanka sameyn kara. Kaliya waxay kudareysaa waqti, kharash, halis waxayna yareyn kartaa tayada adeegga aad siineyso macaamiishaada. Waa inaad leedahay saliideed - urur kastaa waa inuu lahaadaa.